ညီလင်းသစ်: ခဏတာ နှုတ်ဆက်ခြင်း
Posted by ညီလင်းသစ် au 1.4.11
ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ ညီလင်းရေ ... ဖတ်ပြီးစိတ်မကောင်းဘူး
ဒဏ်ရာအမြန်သက်သာကောင်းမွန်လာပါစေ ... အက်ဆီးဒင့်ဖြစ်တာက ချက်ချင်းဆိုထူပူပြီး ဘာမှမဖြစ်လောက်ဖူးထင်ပေမယ့် ကြာလာရင် ဒဏ်ဖြစ်လာတတ်တယ် ဂရုစိုက်ပါဦး မိတ်ဆွေတယောက် အဲလိုဘဲ ကားအက်ဆီးဒင့် ဖြစ်တာ နောက်တော့ ပြန်ပြန်နာလာရော ...
အိပ်ခါနီး reader ဖွင့်ကြည့်တော့ နှုတ်ဆက်ခြင်းလို့ တွေ့တာနဲ့ ရောက်လာတာ။
လက်က တကယ်ကြီး ခိုက်မိသွားတာလား။ April fool လုပ်တာလား။ ပို့စ် နောက်ဆုံးမှာ :D အဲဒီ icon ထည့်ထားတော့ ဇဝေဇ၀ါ ဖြစ်သွားရော။
တကယ်ဆိုရင်တော့ နားနားနေနေ နေပြီး ဂရုစိုက်ပါ။
fool လုပ်တာဆိုရင်တော့ .... အင်းးးးးး
လူကြီးတွေကို နောက်ရင် ငရဲကြီးတတ်တယ်နော ... :)
စိတ်မကောင်းစရာပဲ အစ်ကိုရေ.........ဒဏ်ရာရတဲ့ကြားကနေ Aprilfool လုပ်တာလား :D တော်သေးတာပေါ့ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဖြစ်မသွားလို့ ။ ဥရောပဘက်က ဘလောခ့်ကာတွေ စာရေးနိုင်မယ့် ကံဇာတာညံ့နေပုံရတယ် :) ဗေဒင်လေးဘာလေး မေးဦးမှ .. မြန်မြန်သက်သာပါစေနှော်။
တစ်ကယ်ဆိုရင် စိတ်မကောင်းပါဘူး ကိုညီလင်းသစ်..။
ဒီထက် ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ဖြစ်မသွားတာ တော်ပါတော့တယ်။
take care ပါရှင်။
တိုက်ဆိုင်တာကလည်း ဧပရယ်ဖူးလ်းဒေးမှ ဖြစ်ရတယ်လို့... :P
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ဖတ်ရတာ တကယ်ကို စိတ်မကောင်းပါဘူး။ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ဖြစ်မသွားတာကိုဘဲ ကျေးဇူးတင်ရမှာပါနော်
စာရေးတာ နားတယ်ဆိုတာလည်း အခိုက်အတန့်ဘဲမို့ မကြာခင် ပြန်ရေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
အမြန်ဆုံး သက်သာ ပျောက်ကင်းပါစေနော်။
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဒီနေ့မှ ဖြစ်ရတယ်လို့။
တော်သေးတာပေါ့ နောက်တာတော့ မဟုတ်လောက်ပါဘူးနော်
သက်သာမှ စာရေးပေါ့ ခုတော့ ဟင်းချက်ပြီး ပုံတွေစုထားလေ :P ပြီးမှကြွားနော်သိလား)
ဒါမျိုးတွေ တို့ မယုံဘူး...
မနက်ဖြန် ပိုစ့် အသစ်တခု တင်ပါ... ဟဲဟဲ..း))
တကယ်ကြီးလား April Fool လား ဗျ...
April Fool ဆိုရင်တော့....... ဟင်း ဟင်း
အားဗျာာာာ အစ်ကိုကတော့ ပေါက်ကရ ဒီဘက်မှာ အဲ့လို တွေမကစားကြတော့ မသိဘူး ခဏခဏ ခံရလည်းမမှတ်ဘူးး ခုလည်း အတည်ကြီးလားဆိုပြီး စိတ်တွေပူ ခေါင်းစဉ်ဖတ်ကတည်းက အစ်ကိုခရီးများထွက်မလို့လားဆိုပြီး တွေးနေတော့ နောက်ဆုံးကျတော့ ပြုံးနေပုံထောက်တော့ မဖြစ်နိုင်ဘူးး) ဂရုစိုက် အစ်ကို ယတြာခြေတာဆိုလည်း ကောင်းသွားတာပေါ့ အစ်ကိုက မြှပ်ကွက်နဲ့ရေးထားတာဆိုတော့ တကယ် ဟုတ် မဟုတ်လည်း သေချာမသိ ခေါင်းတောင်နည်းနည်းစားသွားတယ် ။
တကယ်လား.. ဧပရယ်ဖူးလား... စိတ်မကောင်းတာ တ၀က်တပျက်နဲ့... :D.. ဒီနေ့က သိပ်စကြတာကိုး.. အဟဲ..
နောက်နေ့မှ..ဒီအကြောင်းကို ဆက်ပြောကြရအောင်လေ..ဒီနေ့ ဘာဆိုဘာမှ မယုံရဲဘူး..ဘူး..ဘူး..နိုးနိုးနိုး
ဒီလောက် ဓါတ်ပုံရိုက်တဲ့သူက လက်ကောက်ဝတ်မှာ ပတ်တီးလေးပတ်ထားပုံပဲဖြစ်ဖြစ် ရိုက်တင်သင့်တာပေါ့။
ကိုညီလင်းက နောက်တတ်မယ့်ပုံတော့ မရပါဘူး။
ဂရုစိုက်ပါ။ (၃၀ Zone အတွင်းမှာ ကားတွေက တကယ်ဆို ဂရုစိုက်မောင်းကြပါတယ်။)
သက်သာရင်လည်း သက်သာကြောင်း အကြောင်းပြန်ဦးနော...:)
အများကြိး ထိခိုက်မသွားလို့ တော်သေးတယ်နော်အကို...
အမြန်ဆုံး နာကျင်မှုများ ပျောက်ကင်း ပါစေလို့ ဆုတောင်း နေပါ့တယ် အကိုရေ...
ဘာမှ ကြီးကြီးမားမားထိခိုက်မသွားတာဘဲကံကောင်းတယ်....။တကယ်ကော ဟုတ်ရဲ့လား...ဇီဇ၀ါတွေ ..အဲ .. ဇဝေဇ၀ါတွေဖြစ်သွားတယ်...။ ဘာမှမဖြစ်ပါစေနဲ့... မြန်မြန်သက်သာပါစေ..။
မ mie nge, လပြည့်ရိပ်, မလေး, မချော, ပေါက်, မစူးနွယ်, ညီမ Angelhlaing ...
ကျနော် နေကောင်းပါတယ်ခင်ဗျား၊ ဘာဆို ဘာမှကို မဖြစ်ပါဘူး၊ ဒီပို့စ်က April fool လုပ်တာ သက်သက်ပါ၊း) နောက်ဆုံး စာကြောင်းဖတ်ပြီး သေချာပေါက် သိသွား ကြလိမ့်မယ်လို့ ကျနော်က ကျိန်းသေ တွက်ထားခဲ့တာ၊ အခုလို အရိုးခံနဲ့ စိတ်ပူကြတာကို တွေ့မှ ကျနော်ရေးတာ သိပ်မရှင်းဘူးထင်တယ် လို့ တွေးမိ တယ်၊ ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေ၊ သောကတွေ၊ ဝမ်းနည်းခြင်း တွေ၊ အရသာရှိတဲ့ ဟင်းတွေ ဝေမျှနေကြတဲ့ မောင်နှမ တွေအချင်းချင်း ရှားတောင့်ရှားပါး ရက်လေးမှာ ခင်ခင် မင်မင် နောက်တဲ့ သဘောပါဗျာ၊ ငါတို့ကတော့ စိတ်ပူ လို့၊ သူကတော့ အရူးလုပ်ရက်တယ်-လို့ မတွေးပါနဲ့ နော်၊ အင်း..ဧပြီ ၁ ရက်နေ့ကို သတိမထားမိတာကပဲ ကျနော့်အပေါ် သံယောဇဉ် ရှိတာကို မြင်လိုက်ရလို့ ဝမ်းမြောက်၊ ကျေးဇူးတင်ရပါတယ်၊
(ဒီအဖွဲ့က ဧပြီ ၁ ရက်နေ့ကို သိပ်သတိမထားမိဘဲ ကျနော့်အပေါ် တကယ့်ကို ရိုးရိုးသားသားနဲ့ စိတ်မကောင်း၊ စိတ်ပူကြတဲ့ အဖွဲ့ပေါ့၊ )
မေဓာဝီ၊ မဘေဘီ၊ MC, ကိုနေဝဿန်၊ ဖြိုး ...
သတိကောင်းကြတယ်နော်း)၊ ယုံချင်သလိုလိုနဲ့ ပြက္ခဒိန် ကို သတိတရ ရှိနေခဲ့ပုံပါပဲ...၊
(ဒီအဖွဲ့ကတော့ ဇဝေဇဝါ ရှိကြသူ၊ ဧပြီ ၁ ရက်ကိုလည်း အမှတ်ရကြသူများ ပါပဲ)
မသက်ဝေ၊ မောင်မျိုး၊ mm, မကောင်းမွန်ဝင်း ...
လုံးဝကို မယုံရေးချ မယုံပေါ့...ဟားဟား၊ ပါးနပ်ပါတယ် ဗျာ၊ ဒါမှမဟုတ် မကြာခဏ ခံရဖူးတာလည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ် မယ်..အဟဲ၊
(ဒီအဖွဲ့ကတော့ ခေါင်းထဲမှာ “ဒီနေ့ဟာ ဧပြီ ၁ ရက်နေ့၊ သွားသတိ၊ စားသတိဟေ့”လို့ တချိန်လုံး သေသေချာချာ သတိပေးနေကြသူများ ပါပဲ)
အမကဖတ်ပြီး တကယ်ထင်နေ ပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာ နောက်ဆုံးစာကြွင်း ကျမှဘဲ အေပ၇ယ်ဖူလ်း လုပ်တာသိ၇တော.တယ်။
ဟွန်း ..... မကျေနပ်ဘူး နောက်နှစ် ဧပြီလ ကို စောင့်နေတယ်..ကလဲ့စားချေဖို့ :P
လက်ထိသွားရင်မအိမ်သူကကွန်ပျူတာတောင်ပေးကိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်တာရယ်အဆုံးကစာသားရယ်က ကယ်သွားလို့။အခုမှOnline ရောက်လာတာဆိုတော့ comments တွေဖတ်ပြီးဇတ်ရေလဲ လည်သွားတယ် ကံကောင်းလို့။
ရေးပြီဆိုတော့လည်း တကယ်ထင်အောင် ရေးရတာပေါ့ အမရေ..၊း)
သိပ်စိတ်ကြီးတာ,ဟုတ်လား...ဟားဟား၊ အခုတည်းက ဒိုင်ယာရီမှာရေး၊ ဖုန်းမှာ reminder ထည့်ပြီး ကလဲ့စား ချေဖို့ ပြင်ဆင်တော့မယ် ထင်တယ်...၊ :D
အင်း...ဒီနေရာမှာတော့ နောက်ကျပြီးမှ ရောက်လာတာ ခပ်ကောင်းကောင်းပဲ ထင်တယ်နော်...၊း)
သေးတာ...:D နောက်ဆုံးမှ သတိရတော့တယ်...။
လူကြီးကိုနောက်စရာလားး) ဒီက ဧပရယ်ဆို ကိုယ့်မွေးနေ့နဲ့သင်္ကြန်ဘဲ သိတာ ... တခါမှလည်း အစအနောက်မခံရဘူး ဘယ်သူ့ကိုမှလည်း မနောက်ဖူးဘူးဆိုတော့ ခံလိုက်ရတာပေါ့လေ .. ထားပါတော့ ထားပါတော့ သူများတွေ စိတ်ပူရအောင်လုပ်တဲ့အတွက် လျော်ကြေးအနေနဲ့ သင်္ကြန်လည်းနီးပြီဆိုတော့ သင်္ကြန်သီချင်း ကိုယ်တိုင်ဆိုထားတဲ့ အမ်တီဗီလေးတပုဒ်တော့ လုပ်ပေးသင့်ပါတယ် ဒါမှမဟုတ် သင်္ကြန်မမီလည်း နောက် ဆယ့်တလလုံးလုံး ဆိုလို့ရသေးတယ်နော် ... :D
ခုမှ အပြင်က ပြန်ရောက်တာ ကျွန်မဘလော့မှာ ကိုညီလင်းသစ် ကော်မန့်တွေ့တာနဲ့ မင်္သကာလို့ ပြန်လာကြည့်တာ.. ဟွန်း ထင်တဲ့အတိုင်း ဖြစ်နေပြီ။ ဖတ်ရင်းနဲ့ နောက်တာလားမသိဘူးလို့ တွေးမိပေမဲ့ တကယ်များဖြစ်နေခဲ့ရင် ဆိုပြီး စိတ်ထဲက နောက်နောက်ပြောင်ပြောင် မရေးသွားရက်ဘူး ဖြစ်နေတာ.
ကဲပါ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် နောက်တာဖြစ်စေဦး တကယ် ဒဏ်ရာအနာတရ မဖြစ်တာ ၀မ်းသာပါတယ်.. ပျော်ရွှင်သော ဧပရယ်တစ်ရက်နေ့ပါရှင်.. :P
I'm the latest one and not to be worry.Smiling and reading both blog and comments.Any way take care!
ဟားဟား သိနေတယ်လေ....တကယ်ဖြစ်ရင် အဆစ်လွဲတာက စာရိုက်ဖို့ မပြောနဲ့ လှုပ်နိူင်မှာတောင် မဟုတ်ဘူး....ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် Happy April Foolပါ ကိုညီလင်းသစ်ရေ...:)
ဒီနေ့ မနက်ကတည်းက စာတွေဖတ်ရင် သတိထားရမယ်လို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်သတိပေးထားတယ်။
ဒီနေ့မှာ ကိုယ်က ကြပ်နေကျမို့ ကိုယ့်အလှည့်ပြန်မရောက်အောင် သတိထားနေတာ ကိုညီလင်းရဲ့... ဒါကြောင့် မယုံတာပါ...
ခံရပေါင်းများလို့ ဖုနေတာ ဟုတ်ပါဘူး...း))
Facebook မှာလို Like Button တွေရှိရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲနော်... ကော်မန့်တွေ အားလုံးကို Like ချင်လို့...
စကားမစပ် ကိုညီလင်းမှာ Facebook ရှိရင် လာ join ပါလား.. ဘလော့ဂ်ဂါတွေ အများကြီး Facebook မှာ ရှိတယ်... ပျော်စရာကောင်းတယ်... ဒီမှာ Link... အားရင် လာလည်လှည့်ပါ...
( happy April fool )
မအားပြီးပင်ပန်းလွန်းလို့ ဘာမှမဖတ်နုိုင်မရေးနုိုင်ဖြစ်နေတာ။ ခုခဏနားတုန်း သူ့ စီလာဖတ်လိုက်ပါတယ်။ စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားအောင်လုပ်တယ်။ ပြန်ပြီးပြုံးအောင်လုပ်လို့ တော်သေးတာပေါ့...
့happy april fooling!!!
တကယ်အောက်မေ့လို့:(
(ကို) မောင်လေး ...
နောက်ဆုံးအရောက်မှာမှ လွတ်သွားတာပေါ့လေ..၊း)
လူကြီးကလည်း စိတ်မဆိုးရဘူးလေ၊း) ကဲ..အခုတော့ အမ်တီဗီအတွက် ပြောအားရှိသွားပြီ ပေါ့လေ..ဟုတ်၊ ကျနော် စ,လုပ်နေပါပြီဗျာ၊ သင်္ကြန်သီချင်းတော့ မဟုတ် ဘူး၊ အားလုံးသာ အဆင်ပြေရင် သိပ်မကြာခင်ကို ဖြစ်လာမှာပါ၊ ခဏလေးနော်....၊း)
ဗွေမယူဘူး ဆိုလို့လည်း ဝမ်းသာပါတယ်ဗျာ...၊း)
ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ အခြေအနေတွေက ပုံမှန်ပြန်ဖြစ် နေပြီဆိုတော့ ပြုံးပြုံးလေးနဲ့ ဖတ်သွားတယ်ပေါ့..၊း)
အမကတော့ ဒါမျိုးတွေ ရိုး..ဟိုး..ဟိုး.. နေပြီလို့ ပြောမှာ သေချာတယ်...၊း)
ဘလော့ဂ်တစ်ခုရောက်၊ စာတစ်ကြောင်း ဖတ်ပြီးတိုင်း "ဧပြီ ၁ ရက်နေ့" ဆိုပြီး အခေါက်ခေါက် ရွတ်နေမှ တော်ကာကျမလား မသိဘူးနော်..၊
အဲဒါကြောင့် ပြောပါရောလား၊ သတိကောင်းတဲ့ အဖွဲ့ထဲ မှာ ပါတယ်လို့...၊း) Facebook ကို လာဖိတ်လို့လည်း ကျေးဇူးပါဗျာ၊ လာနိုင်ဖို့ ကျနော်ကြိုးစားပါ့မယ်...နော၊
လူတွေကို စိတ်မကောင်းဖြစ်စေဖို့ တကယ့်ကို မရည်ရွယ်ရိုး အမှန်ပါ၊ အတည်ပေါက် ဖြစ်အောင် ကြိုးစားရင်း နဲ့ပဲ...၊း)
ပြန်ပြီး ပြုံးသွားတယ်ဆိုလို့ တော်သေးတာပေါ့၊ အခုတလော ပျောက်နေပါတယ် အောက်မေ့တာ အလုပ် များနေတာကိုး...၊
ကဲ..အခုတော့ သိသွားပြီလေ၊ မဟုတ်မှန်း....၊း)
ဒီနေ့ကို သတိထားမိပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိုးမခမှာပါတဲ့ မိုးနက်ဝမ်း (MoeNed-One) ယူနီကုဒ် အောင်မြင်စွာ တီထွင်၊
ကွန်ပျူတာသုံး မြန်မာစာကို နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြုတော့မည်......... ဆိုတာကိုတောင် ဖတ်ပြီး ဒေါင်းလုတ်ကိုမနှိပ်ကြည့်ဘူး..ဟဲဟဲ...
အခုက ကိုညီလင်းကို စနောက်တတ်မယ် မထင်တာရယ်၊ ပြီးတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် လက်ကျိုးခံတဲ့နည်းနဲ့ စနောက်လိမ့်မယ် မထင်တာကြောင့်ရယ်ပါ။ ကြားဖူးတာက သူများတွေကို ချောက်တွန်းတာမျိုးတွေပဲ ဆိုတော့လေ :P
ကိုညီလင်းသစ်က လူတွေကိုပျော်အောင် တစ်ခုခုတော့လုပ်မယ်လို့ထင်ထားမိသားပဲ။
ဖတ်စက နည်းနည်း စိတ်ပူပါတယ်။
အွန်လိုင်းပေါ်က အချိန်တွေနဲ့ ဖြစ်ရပ်မှာကုန်မယ့် အချိန်တွေရယ် ကိုတွက်မိတယ်။
“ ဒီလူက စာအရေးကောင်း (presentationတော်တာ)တယ်” ဆိုတာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်သတိပေးရင်း ဖတ်ခဲ့ရပါတယ်။
2 ရက်နေ့မှ လာဖတ်ဖြစ်ပေမယ့်
မနေ့က တင်ထားတာ ..
နဲနဲတော့ ရိပ်မိလိုက်တယ် ..
စာဖတ်ရင်း စာရေးတဲ့သူရုပ်ကို တွေးပြီး ဘယ်လိုတွေ ဖြစ်နေမယ် ဘယ်လိုနာမယ် ဆိုပြီးပုံဖော်ရင်းဖတ်လာမိတာ ခုရက်တွေမှ ပို့စ်တွေ ဖတ်ပေမဲ့ဗျာ တကယ် လေးစားမိလို့ စိတ်ပူမိပါတယ် .. နောက်ဆုံးကျမှ ဒါကိုးးးး ဆိုပြီးသိတာ ပျော်ရွှင်ပါစေဗျာ.. .
အော်..ဒီလိုလား... နောက်တယ်ပေါ့ :)
ကျနော့်မိတ်ဆွေ တစ်ယောက်တော့ အဲဒီ မိုးမခရဲ့ April fool မှာ ကောင်းကောင်းခံလိုက်ရတယ်ဗျ...၊း)
Ta khar ta lay bar.... :)
အတွက်အချက်ကောင်းတာကြောင့် လွတ်သွားတာပဲ ဖြစ်မယ်...အဟဲ၊
ရက်ကျော်နေပေမယ့် သတိကောင်းတုန်းပဲ...၊း)
ဒီရက်နဲ့လည်း တိုက်ဆိုင်သွားတာနဲ့ ခင်ခင်မင်မင် နောက်လိုက်တာပါပဲဗျာ...၊း)